Energizer wuxuu kusoo bandhigi doonaa 26 taleefannada casriga ah MWC 2019 | Androidsis
Energizer wuxuu la imaan doonaa 26 taleefannada casriga ah MWC 2019
Bishii Janaayo horey ayaa loo xaqiijiyay in Energizer wuxuu ka mid noqon lahaa sumadaha MWC 2019. Astaantan, oo loo yaqaan taleefannada casriga ah ee leh baytariyada waaweyn, ayaa si buuxda ugu heellan soo saarista taleefannada sannadkan. Sababtoo ah waxay soo jeediyeen inay noqdaan mid ka mid ah halyeeyada weyn ee dhacdada taleefanka ee Barcelona. Munaasabad ay ku imaan doonaan iyagoo wata taleefanno fara badan, sidii horay loogu bartay.
Astaantu waxay la timid wax intaa ka badan oo aan ka yarayn 26 taleefannada casriga ah. Energizer sidoo kale wuxuu sharad ku dhigaa dhammaan noocyada casriga ee kiiskan. Marka waa khamaar cad qaybta astaanta si loo gaaro dhammaan noocyada isticmaaleyaasha. Marka waa inaan noqonaa kuwa feejigan wax kasta oo ay naga tagayaan toddobaadyadan.
Qaar ka mid ah dhinacyada taleefannada casriga ah ee calaamaddu ku soo bandhigi doonto MWC 2019. Waxaan filan karnaa inay jiri doonaan dhowr nooc oo heer dhexe ah, oo ku imaan doona iyagoo shaashadda shaashadda kala socda. Dhinaca kale, waxaa jiri doona taleefannada casriga ah, mid ka mid ah takhasusyada ee Energizer ilaa hadda. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale jiri doona dhowr moodal oo leh kamarad hoos u dhacda, oo laga yaabo inay ku dhiirrigeliso naqshadeynta ee Vivo Nex.
1 Energizer HardCase: Mobiles Rugged
2 Pop Energizer Ultimate Pop
3 Ultimate Energizer
Energizer HardCase: Mobiles Rugged
Ugu horreyntii waxaan helnaa kala duwanaanta HardCase, oo sida aan ka dheehan karno magaceeda, ay yihiin taleefannada casriga ah ee rooga ah ee laga helo Energizer sannadkan. Waxaa ku jira saddex nooc, oo leh magacyada H501S, H570S iyo H591S. Dhamaantood waa MIL-STD shahaado la siiyay sidoo kale IP68. Waxa intaa dheer in shaashad lala yeesho Gorilla Glass.
Waqtigaan la joogo, maahan in qeexitaannada oo dhan la heli karo, in kasta oo tafaasiisha qaaska ah ee nooc kasta la yaqaan. HardCase H501S, tusaale ahaan, wuxuu ku imaan doonaa kamarad gadaal laba-gees ah leh. Arinta Energizer HardCase H591S wuxuu nagu sugayaa batari dhan 5.800 mAh awoodda iyo kamarad gadaal oo labalaab ah + 16 + 0,3 MP iyo labo laab 8 + 0,3 MP. Qaabka kale ee u dhexeeya, HardCase H570S wuxuu lahaan lahaa batari 6.500 mAh iyo kamarad gadaal oo laba-gees ah.
Ugu yaraan waxaan heli karnaa fikrad ah waxa Energizer ayaa nooga tagi doonta noocyada taleefoonada rooga ah. Saddex nooc, oo umuuqda inay gaarayaan bartamaha iyo heer hoose, laakiin leh iska caabin wanaagsan iyo baytariyada waaweyn.
Pop Energizer Ultimate Pop
Tan labaad Noocyada kala duwan ee tamarta ayaa isla markiiba indhaha ku qabta nashqadeyntiisa, kaamiraddan balaadhinaysa. Shaki la'aan, sharad xiiso leh oo ku saabsan qaybta astaanta. Markan oo kale waxaan ku dhex leenahay laba taleefan oo casriga ah, Ultimate U620S Pop iyo Ultimate U630S Pop .. Suurtagalnimada in midkii ugu horreeyay uu yahay midka ugu xiisaha badan labadan taleefan.
Tan iyo markii ay la timid shaashad 6,2-inji ah oo leh xal FullHD +. Gudaha waxaa ku jira 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah, oo leh processor Helio P70 iyo batari 3.200 mAh ah. In kasta oo ay kamaradahahooda soo jiitaan dareenka ugu badan, tan iyo markii ay ku timid shan lenses. Gadaal saddexlaab ah 12 + 5 + 2 MP iyo labalaab ah 16 + 2 MP xagga hore.
Qaabka kale, Ultimate U630S Pop, waa nooc ka sii yaraa qaabkan kale. Waxay ku timid 16 + 2 MP laba kamaradood oo gadaal ah iyo waliba kamarad hore oo ah 16 + 2 MP. Waxay lahaan laheyd Helio P22, 4 GB RAM iyo 64 GB oo keyd gudaha ah, oo ay weheliso 3.500 mAh oo batari ah.
Ugu dambeyntii waxaan kaheleynaa bartanka-dhexe ee kasoo cusboonaaday Energizer. Qiyaasta la socota naqshadeynta hadda jirta, oo leh darajo u eg qaab biyo ah shaashadeeda. Nooca ayaa noo soo bandhigaya seddex nooc oo ku jira, Ultimate U620S, Ultimate U570S iyo Ultimate U650S. Suurtagalnimada tan koowaad waa tan ugu xiisaha badan uguna dhameystiran seddexda aalad. In kasta oo ay dhammaantood la yimaadaan shaashado waawayn oo xallinta Full HD +.
Marka laga hadlayo Energizer Ultimate U620S waxaan heleynaa 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd gudaha ah, oo ay weheliso processor-ka MTK6765, marka lagu daro batari 4.000 mAh ah. Marka ismaamulku dhibaato ma noqon doono. Waxay sidoo kale la imaan laheyd Android Pie sida nidaamka hawlgalka caadiga ah. In kastoo, kamaraddaadu ay noqon doonto bartaada xoogga leh, leh kamarad gadaal seddex geesle ah oo 16 + 2 + 0,2 MP ah. Afka hore wuxuu noqon lahaa 16 Xildhibaan.
Dhinaca kale waxaa jira Ultimate U560S, oo la yimaada Helio P22, 4 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keydinta gudaha ah. Gudaha, batari awood dhan 3.500 Mah. Marka laga hadlayo Ultimate U570S, waxaan kaliya ognahay inuu yeelan doono 32 GB oo keyd ah oo gudaha ah iyo 3.000 mAh batari. Laakiin xog dheeri ah oo ku saabsan qaabkan lama soo bandhigin. Labadan moodal ee kale inta u dhexeysa waxay la imaandoonaan kamarad gadaal laba jeer ah.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan horey u ogaanay kuwan marka hore sideed moodal oo Energizer naga tagi doono MWC 2019. In kasta oo sumaddu ku iman doonto wadar ahaan 26 taleefanno, iyadoo aan shaki ku jirin shirkad soo bandhigi doonta taleefannada ugu badan dhacdada caanka ah. Waxaa macquul ah inay jiri doonaan warar toddobaadkan iyaga ku saabsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Energizer wuxuu la imaan doonaa 26 taleefannada casriga ah MWC 2019
Waa maxay telefoonada isku laaban ee aan ku arki doonno Android-ka sanadkan?
Google wuxuu soo daayaa Febraayo Amniga Patch ee Qalabka Pixel